Ny via na viagn – Malag@sy Miray
Miala tsiny aho aloha fa ho entiko any amoron-tsiraka atsinanana indray ianareo. Sao mantsy misy hilaza indray any ho any hoe, angaha dia ao amorontsiraka atsinanana ao ihany no misy zavatra. Io anefa no mba fantatro ary izay mba fantatro ao no tanteriko.
Misy zava-maniry iray hita matetika eny anaty rano. Be vatana izy io ary mety hahatratra sahabo eo ambany kelin’ny roa metatra eo ny hahavony ary mitangorongorona izy ireo matetika. Maintso dia maintso ny raviny ary manahaka ny ravin-tsaonjo fa maranitra kosa ny tendrony ary matetika misandrahaka manakatra ny lanitra fa tsy mitanondrika toa ny an’ny saonjo. Via no fiantsoana azy any amin’ny Betsimisaraka. Tsy fantatro ny anarany amin’ny teny vahiny ka iangaviana izay mahafantatra mba hilaza an’izany eto.
Tsara tarehy ny via nefa tsy azo lalaovina fa misy poizina mampangidihidy tsy misy ohatra izany ary marary mihitsy aza. Ny voany dia boribory kely be dia be mifono ao anatina fonosana maitso misarina ny fo lehibe somary lavalava. Rehefa matoy izy io dia mitresaka ilay fonosana ary hita eo ilay voany izay mifono ihany koa hoditra mavomavo tsirairay avy.
Misy poizina maka-tenda be sy mampangidihidy ihany koa ireo voany ireo nefa azo hohanina ihany. Toy izao no fomba fikarakarana azy. Rehefa manapaka azy aloha dia mitandrina tsara tsy ho voan’ilay rano nivoaka avy eo amin’ilay nanapahana azy. Rehefa any an-trano dia maka lavenona be dia be dia hosorana an’iny ny tanana ary alatsaka ao anaty lavenona ilay voany mavomavo, ary ao anaty lavenona no anesorana an’ilay hodiny mavomavo. Ny voa azo avy eo dia maintimainty na milolom-barahina antitra be angaha. Iny no sasana tsara dia andrahona. Matetika dia amin’ny rano sy sira fotsiny ny hanaovan’ny olona azy. Rehefa masaka ilay izy dia potsipotserina ary mavomavo mainty ny ao anatiny. Ny tsirony dia hafa kely tsy hitako izay hampitoviana azy fa tsara. Tsy toy ny ovy na tena manokana mihitsy.
I to misy hatsikana kely momba ny via (na viagn hoy aho ery ambony). Tadidio ilay voa mavo sy mainty voapotsipotsitra:
Vahiny roa nandalo tao an-tanana dia nivily hanontany lalana. Teo am-pisakafoanana ny tao an-trano ary via no teo ambony lovia. Nanasa hisakafo ry zareo fa dia nanda ireto mpivahiny. Rehefa nanohy ny lalany ry zareo dia nandeha ny resaka:
– Da oman-draha tsy foaningna olo ao
-Da oman-draha tsy fohanigna hoaho olo ao
– Da viagn koa ma nahitako an’azy fa da selasela io.
Par Su 6 Commentaires
4 mars 2007 à 19:14
> Da homan-draha tsy fohanigna 😀
Da ‘sy heko hoe fohanigna na viagn na viagn ny via 😀 ‘Saotra rangnandria
4 mars 2007 à 22:31
5 mars 2007 à 8:41
Tomavana> Ie, sady tsara raha asiana anamalaho.
Rajiosy> Vao teo vao teo.
5 mars 2007 à 22:08
misaotra amin’ny fitantara tsy mahazatra e
5 mars 2007 à 22:09
hay tokoa moa ao antananarivo fiteny ny he tselatsela – haingakaingana !
6 mars 2007 à 12:56
Ianareo mamaky no isaorana e.
Rajiosy> Fiteny ao Antananarivo tokoa io. Ilay izy ange ny fiteny azy fotsiny no hafa e, io selasela io hoe « tsy ela tsy ela ».